अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेनको सानदार जित, को हुन बाइडेन ? — Motivatenews.Com
काठमाडौं – अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन । मंगलबार सम्पन्न निर्वाचनले आगमी चार बर्षका लागि बाइडेनलाई निर्वाचित गरेको हो ।
दुई राज्यको मतगणना हुन बाँकी हुँदै बाइडेनले चुनाव जितेका हुन । विजयीका लागि चाहिने २७० इलेक्टोरल कलेज भोटको आवश्यकता पर्नेमा बाइडेनले २९० इलेक्टोरल कलेज भोट प्राप्त गरेका छन । मतपरिणाम आउन बाँकी २ राज्यमध्ये एक राज्यमा बाइडेन अगाडि छन ।
को हुन बाइडेन ?
७८ वर्षमा राष्ट्रपतिमा चुनिएका बाइडेनले राजनीतिमा पहिलो पाइला चाल्दा उनलाई मतदान दिएर जिताउने कयौं मतदाता जन्मिएका थिएनन् । उनलाई मतदान गरेर राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने उनको पुस्ता कमैमात्र होलान् ।
सन् २००९ देखि २०१७ को बीच बाइडन बराक ओबामाका उपराष्ट्रपति थिए । उनको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रचार अभियान ३३ वर्षअघि सन् १९८७ मा भएको थियो । बाइडेन योजनाबद्ध रूपमा तौलिएर बोल्ने राजनीतिज्ञहरूको भिडमा एक वास्तविक मानिसजस्तो देखिन्छन् ।​ बाल्यकालमा भकभकाउने समस्या स्मरणमा रहेकाले आफूले पढेर बोल्नुका साटो मनका कुरा बोल्न रुचाउने उनले बताएका छन् ।​
बाइडेनले अमेरिकी सिनेटको चुनाव सात पटक जितेका छन् । उनी सधैभरी कामदार तथा मजदुर वर्गलाई आफ्नो स्वतःस्फूर्त भाषणमार्फत् तरङ्गित पारिदिन सक्छन् । ​बाइडेनसँग वाशिङ्टनको धेरै लामो अनुभव छ। सिनेटमा तीन दशकभन्दा धेरै उनि ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा आठ वर्ष रहे। करिब ५० वर्षदेखि उनी अमेरिकाको उच्चस्तरको राजनीतिमा संलग्न छन् ।